iCoat of Arms entsha yePhondo lase Ntshona Koloni yapasiswa yaze yabekwa ngokusesikweni yiPalamente yePhondo ngomnyaka ka 1998.
Le Coat of Arms yenziwa ngu Fred Brownell, emva kophando olunzulu nokuthethana nabamele yonke imibutho yeze politiki eyayikhona kwi Palamente yePhondo. Ii-elementi ezisetyenzisiweyo zakhethelwa ukubonakalisa ukukhetheka nokwahluka kwe Ntshona Koloni.
Isisekelo esiluhlaza okwesibhakabhaka simele iNtaba yeTafile-Table Mountain, intaba edumileyo yase Ntshona Koloni. Apha kanye emazantsi kwesi sisekelo kukho umbhalo/motto ebhalwe kwiintsiba zenciniba- SPES BONA- nothetha “Ithemba elihle”. Iintsiba zenciniba zimele indawo yase Little Karoo. Ukusuka kwesi sisekelo kukho ikhaka, neline anchor, ihlahla lomdiliya kunye nembiza yodongwe embindini.
Le anchor imele ithemba, ukuzinza, ukholo kunye nembali yezolwandle lweli phondo. Imidiliya imele ukubaluleka kwezolimo, kunye nokuveliswa kwe wayini eNtshona Koloni. Imbiza yomdongwe iluphawu lemveliso kunye nesixhobo esasisetyenziswa ngabantu bokuqala ukuhlala kweli lase Ntshona Koloni, amaKhoi.
Elikhaka lixhaswe liqhwarhashe (Equus quagga quagga) kunye ne Bontebok (Damaliscus dorcas dorcas),zombini ezi zilo ziyinzalelwane yeliphondo. Eli qhwarhashe sele latshabalala, kodwa kukho uphando olwenziwayo oluzama ukubuyisela esi silo. Ibontebok nayo yakhe yasecicini lokutshabalala, kodwa ngoku sele iphinde yabaninzi. Ngaphezu kweli khaka kukho isithsaba esenziwe ngeentsimbi ezihlohliweyo, sasikade sinxitywa sisizwe sama San, ne protea, nemele iintyatyambo ezifumaneka kweli phondo kunye neeringi eziluphawu lwento engenasiphako, njengoko zingenasiqalo kwaye zingenasiphelo. Le coat of arms intsha isebenzela ukuphuhlisa ubuni nesidima sephondo lase Ntshona Koloni.